Xildhibaan Faroole oo ku baaqay inaan la faragalin Ra’iisul wasaaraha Farmaajo soo magacaabayo | Baydhabo Online
Xildhibaan Faroole oo ku baaqay inaan la faragalin Ra’iisul wasaaraha Farmaajo soo magacaabayo
Xildhibaan C/raxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud (Faroole) oo dib ugu laabtay Magaalada Garoowe, ayaa Madaxda Madasha ugu baaqay in aanay ku mashquulin Madaxweynaha cusub ee la doortay, Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo).
Xildhibaan C/raxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud, ayaa waxaa uu Madaxda Madasha uu ugu yeeray in fursad Madaxweynaha Somaliya loo siiyo uu ku soo xusho Ra’iisal Wasaarihiisa.
Isagoo Shalay Subax ka tagey Magaalada Muqdisho, ayuu sababta uu uga tagey waxaa uu ku sheegay in dad culeys ku haaya awgood, aanay u isticmaalin in uu fara-geliyo cidda uu soo magacaabayo Madaxweynaha.
C/raxmaan Sheekh Maxamed, ayaa tilmaamay in uu ku sii nagaan doono Garoowe inta laga soo magacaabayo Ra’iisal Wasaaraha, lagana soo xulayo Golaha Wasiirada ee Xukuumadda.
Wuxuu intaa ku daray Dowladda Dhexe Somaliya in aanu ku filnayn dhaqaalaha ka soo xarooda Dekeda Muqdisho, sidaasi daraadeedna aan loo baahnayn in Madaxweynaha lagu fara-geliyo cidda uu soo magacaabi doono, lana rabo in la iimaansado cidda uu soo xusho.
C/raxmaan Faroole, ayaa Madaxda Maamul Goboleedyada ugu baaqay in ay u adeegan bulshadooda ay abaaruhu halakeeyeen, oo aanay ku mashquulin shaqada Madaxweyne Farmaajo.